Ny Microsoft dia manolotra adieu amin'ny olona Bar amin'ny Windows 10H19 ho avy
Fampahalalana bebe kokoa momba ny fanoloana Cortana amin'ny Windows 10 19H1
Notaterina vao haingana izahay fa toa miasa i Microsoft mba hahafahana manolo an'i Cortana miaraka amin'ny feo hafa mpanampy ao amin'ny Windows 10 19H1 manaraka, ary nanombana fa ireo fampiharana ireo dia mila manana alalana Above Lock Screen amin'ny fanoloana tanteraka. ...
Windows 10 Task Manager manomana tweak tsara ao amin'ny 19H1
Ny Microsoft dia mampifandray maro ny Windows 10 19H1, ary toa toa ilay hajiantsika vaovao Albacore tena tadiavintsika dia ny manavaka azy ireo. Ny findainy farany dia ny fampidirana Microsoft ny fahafahana mametraka ny takelaka fanalahidy ho an'ny mpitantana ny asa, mamela anao, ho an'ny ...
Fomba fijery 4 raha toa ka manana SSD ny Windows 10 Windows PC
Ireo antoko Solid State na SSD dia tena mahazatra amin'izao andro izao. SSDs dia haingana ary azo atokisana ihany koa. Ny ankabeazan'ny miditra amin'ny PC-ambony avo lenta amin'izao andro izao dia mampiasa SSDs fa tsy ny HDDs nentim-paharazana. Raha vao nividy PC vaovao ianao fa tsy ...
5 malaza Windows lalao izay miasa amin'ny Linux
Ny gaming dia lasa fitsipika ao Linux noho ireo teknolojia toy ny divay izay manamaivana kokoa ny lalao Windows. Ao anatin'ity lisitra ity, dia hodinihintsika ny 5 amin'ireo lalao Windows malaza indrindra izay miasa ao Linux ary afaka milalao izao fotoana izao. Mariho fa na dia ...
Ahoana ny famerenana mamerina ireo dikan-drakitra tranainy amin'ny OneDrive
OneDrive dia napetraka ao amin'ny Windows 10. Tsy voatery ampiasaina izany fa raha tsy esorina ianao, dia hangataka anao hatrany ny hanao sonia azy. Hihazakazaka eo am-piandohana izy io ary mety hampihemotra ny CPU izany raha tsy izany ihany no hitranga raha toa ka misy OneDrive ...
Ahoana ny fametrahana ny haavon'ny haavon'ny Windows 10 fikandrana / hamaha
Ny mixer amin'ny Windows 10 dia tokony ho ny haino aman-jery mahay indrindra amin'ny OS izay tsy maintsy atolotra amin'izao fotoana izao. maOS tsy manome zavatra toy izany fa Microsoft dia tsy nanao fanovana, na fanatsarana izany, hatramin'izao. Misy fampiharana mifehy ny fitantanana ny volavolana fa ...
Wireshark 2.6.5 dia nalefa tamina vulnerabilities maro / Voafandrika voafaritra
Ny tambajotra malaza Pakistana Wireshark dia namoaka version 2.6.5 omaly tolakandro niaraka tamin'ny bug-fixes maro. Taorian'ireo vulnerabilities, dia napetraka tao amin'ny Wireshark 2.6.5 ny bibikely: mety hipoaka ilay fiara manala ny wireshark. Mety hipoaka ny fisintonana DCOM. Mety hianjera ny fanesorana LBMPDM. Ny mpandika lalàna MMSE dia afaka miditra amin'ny ...
Wine 3.21 dia nafahana niaraka tamin'ny fanohanana bebe kokoa amin'ny Android, DirectWrite, Joystick
Ny famoahana vaovao momba ny fampandrosoana vaovao Wine 3.21 dia nambara androany lasa izay ny fanatsarana sy ny famahana ny bug. Ny divay 3.21 dia mamoaka lohahevitra: manoratra ny marika Typelib amin'ny fampiasana ny NDR. Fanohanana an-tsary momba ny dikan-teny Android farany. Fanohanana ireo loharanom-piraketam-peo ao amin'ny DirectWrite. Fanatsarana fanohanana ny joystick. Be dia be …
MusicBrainz Picard 2.0.4 azo alaina amin'ny alalan'ny Snap
Mozika MusicBrainz Picard mozika ankehitriny dia misy amin'ny fonosana snap ho an'ny Ubuntu 16.04, Ubuntu 18.04, ary ambony. Snap dia fonosana rindrambaiko mifototra amin'ny rafitra natao mba hiasa ao amin'ny ankabeazan'ny Linux. Izy io dia manangona ny miankina aminy rehetra, ka ny farany dia Picard 2.0.4 dia miasa ao amin'ny Ubuntu 16.04 raha ...
PlayOnLinux 4.3 dia nalefa niaraka tamin'i POL 5 Winebuild Compatibility
PlayOnLinux, sary manara-penitra ho an'ny rindrambaikon'ny rindrambaiko Wine izay ahafahan'i Linux mametraka programa mifototra amin'ny Windows, navoakan'ny 4.3 andro vitsy lasa izay. Raha mbola eo am-pelatanan'ny Phoenicis PlayOnLinux 5, ny POL 4.3 dia famotsorana manafaka izay mitondra ny fandrindràna an'i Phoenicis (POL 5) ...
qBittorrent 4.1.4 nalefa miaraka amin'ny .TS Fantaro fa azo jerena
Ny mpividy Bittorrent 2 mpitsidika maimaim-poana sy azo itokisana dia navoaka androany niaraka tamin'ny endri-javatra vaovao, bug-fixes, WebUI ary fanatsarana ny fikarohana. qBittorrent 4.1.4 mamoaka hezipa miditra: Fantaro * .ts ny antontan-kevitra ho azo avaozina Alefa hanaisotra ny haavon'ny haavony Clear LineEdit amin'ny ESC Fix divi-zero ny crash Fidio ny takelaka fahafaha miditra amin'ny speed ...
Ahoana no hametrahana Apache Tomcat amin'ny server Ubuntu
Tomcat dia rindrambaiko ho an'ny loham-pifandraisana mivelatra ho an'ny Linux, Windows, ary ireo rafitra hafa miasa izay natao hamaha ireo Java Serverlet Containers, ary afaka ihany koa mitantana ny Java Server Page teknolojia. Amin'ity toro-lalana ity dia handeha ny fomba hametrahana Apache Tomcat version 9 amin'ny Ubuntu izahay.
Hamafa: diso ny daty sy ny ora ao amin'ny Windows 10
Ny Windows 10 dia afaka mampiseho daty diso sy fotoana ho an'ny antony roa. Mety ho noho ny fotoana tsy ara-potoana, diso ny daty sy ny fotoana, na ny fandefasana ny CMOS batterie. Raha toa ka tsy mampiseho ny fotoana marina ny Windows 10 dia azonao ampiasaina ireto manaraka ireto ...
Ahoana no hamahana an'i Sudo: Add-Apt-Repository: Tsy hita ny baiko
Ahoana no hamaha ny sudo: add-apt-repository: baiko tsy hita amin'ny sudo add-apt-repository ppa: some / ppa ao amin'ny Ubuntu Linux Systems. Raha sendra misy ny hafatra diso "sudo: add-apt-repository: command not found" raha manampy sudo add-apt-repository ppa: some / ppa, izao no tokony hatao: sudo apt-get update sudo apt-get upgrade sudo apt-get install ...
Handefa sary iCloud amin'ny PC miaraka amin'ny CopyTrans Cloudly ho an'ny Windows
Raha te haka ny sary rehetra amin'ny iCloud ao amin'ny PC ianao dia afaka mampiasa ny iCloud.com na iCloud amin'ny Windows. Na izany aza, ny tahirinan'ny rahona, amin'ny alàlan'ny default, dia tsy manome afa-tsy 5GB an'ny tahiry maimaim-poana. Raha mihoatra an'io fetra io ianao, dia tsy maintsy mamafa ny votoatinao na ny fanavaozana ny drafitry ny famandrihana. ...
Fihetseham-po toy izany! TOP-5 Windows 10 Lalao
Tsy hifarana mihitsy ny solosaina PC vs. Nahoana no kivy? Efa nisy lohateny tena mahagaga teo amin'ny PC ary indraindray dia mihazakazaka tsaratsara kokoa! Manaraka ny dingana manaraka, hany ka ny lalao vaovao dia tena malama sy mahavariana. Andao hijery ny coolest 5 avy amin'izy ireo, izay ...
Ahoana ny fomba hanoratana sy hametahana ny lahatsoratra plana amin'ny Windows [Tip]
Rehefa asongadinao ny andian-tsoratra iray ary tsindrio Ctrl + C, dia tsy vitan'ny hoe ny votoatin'ny lahatsoratra ihany fa ny endrik'ireo andinin-tsoratra masina ireo ihany koa. Raha te hampiditra azy ireo amin'ny fampiharana hafa ianao, dia manaparitaka ny votoaty ...
Ny Deepin 15.8 Promo Lahatsary dia mendrika ny "Crown desktop" mavesatra indrindra
Ny famoahana Deepin 15.8 vao haingana no nanintona ny maro tamin'ny fahatongavany - amin'izao fotoana izao ny lahatsary promo vaovao navoakan'ny ekipa ao ambadika dia mampiseho mazava ny antony. Ny horonantsary dimy minitra izay napetrakay etsy ambony, dia mampiseho ny fivoaran'ny varotra UI vao haingana sy ny UX manilika, anisan'izany ny boot vaovao ...
Ahoana no hanaisotra Box List Waiting from Outlook
Maro ny tolotra fantsona fahatelo izay mihazakazaka amin'ny serivisy mailaka malaza toy ny Outlook. Nantsoina ho tolotra fanampiana mailaka ihany koa izy ireo, manatsara azy ireo amin'ny lafiny traikefa, ary ny vokatra. Boxbe manokana manome tolotra valim-panampiana an-tserasera raha toa ianao ka eo ambany fandefasana mailaka. Ao amin'ny ...
1 2 3 4 ... 396 Manaraka
HTTP fitaovana Apple Watch fikarohana Database 10 iPhone MAMAKA Windows 8 Linux Mint fitaovana Cortana Fitaovana finday PPA Toetoetra Ubuntu 14.04 Ubuntu 16 MySQL afa-po Linux Ubuntu Systems Twitter fitaovana finday raki-daza fitaovana API Screen Debian Company WordPress IP adiresy toe-tsaina taona Apps bilaogy Linux Microsoft Windows 10 rafitra Google finday avo lenta Performance GNOME Plugins famotsorana Unité centrale ubuntu 15.04 Microsoft Windows Samsung Galaxy vaovao farany web server HTTPS 'App One ' Phone Video hametraka PHP haino aman-jery sosialy Windows Phone takelaka fikirakirana HTML famerenana Plugin loharano misokatra rindrambaiko PDG app store SSH SEO Up " paoma nbsp ram Apache Firefox Nginx Chrome fifamoivoizana Android command line OS X Facebook Users fanamarinana Rafitra fikirakirana Samsung Malagasy Bible Unix 04 CentOS 7 Server Command lalao SSD Support windows update endri-javatra bilaogy File tahirin-kevitra Ubuntu Time "PC CentOS YouTube Ubuntu 14.10 web browser Windows Bing USB lalao